ဖူးနုသစ်: ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ပေါ်မှာ (၂)
ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ပေါ်မှာ (၂)
ဟိုတယ်တွင် စားပွဲထိုးစဉ်က အထူးသတိထားရသည့် အချက်မှာ ဧည့်သည်ပေါ်သို့ မည်သည့်အရာမှ မှောက်မကျရန် ဖြစ်သည်။ ဧည့်သည်၏ အင်္ကျီပေါ် ဝိုင်မှောက်ကျခြင်း ၊ ရေနွေး မှောက်ကျခြင်း တို့ကတော့ အတော် ရှင်းရခက်သည့် ကိစ္စများ ဖြစ်သည်။ တစ်ခါက အလွန် နမော်နမဲ့ နိုင်လှသော ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်သည် ဧည့်သည်၏ အကျင်္ီ အဖြူရောင် ပေါ်သို့ ဝိုင် အနီရောင် မှောက်ကျခဲ့ ဖူးသည်။ သူက နမော်နမဲ့ လုပ်တတ်သော်လည်း အပြေးက အလွန်မြန်သည်။ ဧည့်သည်ကို မတောင်းပန်ပဲ တစ်ချိုးတည်း လစ်သည်။ ဧည့်သည်က လှည့်ကြည့်တော့ ကွဲနေသော ဖန်ခွက်ကလေးနှင့် သူ့အင်္ကျီပေါ်က ဝိုင်တွေသာ တွေ့ရသည်။ ဘယ်စားပွဲထိုး သူ့အပေါ်မှောက်ချ ခဲ့သလဲ ဆိုတာပင် ရှာမတွေ့တော့။ သူအနားကို လှည့်ပတ်ကြည့်တော့လည်း ဘယ်သူမှ မတွေ့။ ထို့ကြောင့် ဒေါသတကြီးဖြင့် ကပ္ပတိန်ကို လှမ်းခေါ်၍ ပြသနာရှာသည်။ ကပ္ပတိန်က ဧည့်သည်ကို တောင်းပန်ပြီး အနားမှာ လိုက်ရှာတော့ မြန်မာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကိုသာ တွေ့ရ၍ ထိုကောင်မလေးကို ပြသနာ သွားရှာသည်။ ကောင်မလေးကလည်း သူမဟုတ်၍ ပြန်ချဲသည်။ တကယ်တော့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မှောက်ကျသည်ကို တွေ့လိုက်သော်လည်း အချင်းချင်း ဖြစ်နေ၍ မပြောချင်းသာ ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုသို့သော ကိစ္စဖြစ်ပါက ဟိုတယ်မှ ဧည့်သည် ကျေနပ်အောင် ရှင်းပေး ရလေ့ရှိသည်။ ဧည့်သည်အတွက် ယာယီဝတ်ဆင် နိုင်ရန် အဝတ်အထည် စီစဉ်ပေးရခြင်း၊ ဧည့်သည်၏ အဝတ်အထည်ကို ချက်ချင်း လျှော်ဖွတ်၍ အစွန်းချွတ် ပေးရခြင်း၊ အချိန်မီ မပြီးစီး နိုင်ပါက လျှော်ဖွတ်ပြီး အဝတ်အထည်ကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးရခြင်း စသည်ဖြင့် ဧည့်သည်ဘက်မှ စိတ်ကျေနပ်မှု ရသည်အထိ ဆောင်ရွက် ပေးရသည်။ တစ်ခါက ကပ္ပတိန် တစ်ယောက်က “မင်းတို့ မှောက်ချင်လွန်းတယ် ဆိုရင် လူကြီးတွေပေါ် မှောက်စမ်းပါကွာ။ ဟိုတစ်နေ့က ကလေးပေါ် ဝိုင်မှောက်ကျလို့ ငါတို့မှာ ပြသနာ အတော်တက် သွားတယ်။ အစားထိုး ပေးစရာ အဝတ်အစား ကလည်း မရှိတော့ အပြင်ထွက် ဝယ်ရတယ်။” ဟု ရယ်စရာ ပြောဖူးသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ တမင်သက်သက် မှောက်ချခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ အားလုံးမှာ မတော်တဆ သာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ဝင်ခါစက ထိုသို့ အဖြစ်အပျက်များ အလွန် အဖြစ်များ၍ ဘန်ကွေးဌာန၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ထပ်ခါတလဲလဲ မှောက်တတ်သူများကို ခွက်မှောက်ဘုရင် (Spillage King) နှင့် ခွက်မှောက်ဘုရင်မ (Spillage Queen) ဟူ၍ ဘွဲ့ပေးပြီး နာမည်ရေးထား လေ့ရှိသည်အထိပင် ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ ဟိုတယ်တွင် အလုပ်လုပ်ချိန်၌ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်ရသည်။ လက်သည်းကို အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်၍ ညှပ်ထားရသည်။ နှုတ်ခမ်းမွှေး ထားလိုက ထားနိုင်သော်လည်း မုတ်ဆိတ်မွှေး ထားခွင့် မရှိပါ။ ဟိုတယ် မန်နေဂျာများ အမြဲတမ်း ပြောလေ့ရှိသော စကားမှာ နှုတ်ခမ်းမွှေးသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပစ္စည်း (Private Property) ဖြစ်၍ မုတ်ဆိတ်မွှေးမှာ အများပိုင် ပစ္စည်း (Public Property) ဖြစ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ စစ်တပ်တွင်လည်း ဤစည်းကမ်း အတိုင်း ကျင့်သုံးသည် ဟု သိရသည်။ ဆံပင်ကို အမြဲတမ်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြီးသွားရသည်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု မရှိပါက တခါတရံတွင် အလုပ်မဆင်းခိုင်းပဲ ပြန်လွှတ်လေ့ ရှိသည်။
ကျွန်တော့်တွင် အလွန် ပိုက်ဆံနှမြောတတ်သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိသည်။ ဘယ်လောက် နှမြောသလဲ ဆိုလျှင် ဆံပင် ညှပ်ရမှာကိုပင် ပိုက်ဆံ အကုန်မခံချင်၍ ညှပ်လေ့မရှိ။ ကျွန်တော်နှင့် အလုပ်လုပ်သော ဟိုတယ်ချင်း မတူသော်လည်း သူ၏ အကြောင်းကို အခြားသူငယ်ချင်းများ ထံမှ တဆင့် ပြန်ကြားရသည်။ သူဟိုတယ်မှာ အလုပ်ဆင်းတော့ ဟိုတယ် မန်နေဂျာတွေနှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ လေတော့သည်။ သူ့ကို ဟိုတယ်မှ နောက်တစ်နေ့ အလုပ်ဆင်းလျှင် ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ညှပ်လာဖို့ ပြောသည်။ သူက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် သွားရမှာ နှမြော၍ မှန်ကြည့်ပြီး ဆံပင်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ညှပ်သည်။ မှန်ကြည့်ပြီး ဆံပင်ညှပ်တော့ ဆံပင်က ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ဖြစ်နေတော့သည်။ နောက်တစ်နေ့ ဟိုတယ်ရောက်တော့ အားလုံးက သူ့ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ဝိုင်းရယ်ကြသည်။ သူက အိပ်နေတုန်း သူငယ်ချင်းတွေကပဲ သူ့ကို စပြီး ခေါင်းညှပ်လိုက်သလို ကြွက်ပဲ ကိုက်သွားသလို ပြောသည်။ နောက်နေ့ ဆံပင်မညှပ်လျှင် အလုပ်မဆင်းနဲ့ ဟု ပြောမှပင် သူဆံပင်ကို သွားညှပ် လေတော့သည်။
ဟိုတယ်ရှိ စားပွဲထိုးတစ်ယောက်၏ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုကို Portioning ဟုခေါ်သည့် ဟင်းကို ဧည့်သည်များ၏ ပန်းကန်အတွင်း သို့ အချိုးကျစွာ ခွဲဝေခြင်း ပြုလုပ်ပုံကို ကြည့်၍ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ ခွဲဝေ ရန်အတွက် ဆားဗင်း ဂီယာ (Serving Gear) ဟု ခေါ်သည့် သာမန်ထက် အနည်းငယ် ကြီးသည့် ဇွန်းနှင့် ခက်ရင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် တတ်ရသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ရမည့် အလုပ်ကို သိ၍ အစီအစဉ် တကျ လုပ်ပါက ဟင်းပွဲကို တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ အချိန်မီထုတ်နိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကတ်သီးကတ်သတ် တောင်းဆိုတတ်သော ဧည့်သည်မျိုးနှင့် တွေ့လျှင်တော့ အချိန်မီအောင် မလုပ်နိုင်ပဲ ဒုက္ခ ရောက်တတ်သည်။ တရုတ် ညစာစားပွဲအတွင်း ကော်ဖီသောက်ချင်သည် ဟု ပြော၍ နွားနို့၊ သကြားနှင့် ကော်ဖီကို ဟိုတယ်ပတ်၍ လိုက်ရှာရသည်ကို ကြုံဖူးသလို ငါးမန်းတောင် ဟင်းချိုထဲ ဘရန်ဒီ ထည့်သောက်ချင်သည် ပြော၍ ဘရန်ဒီ ရှာပုံတော် ဖွင့်ရသည် လည်း ကြုံခဲ့ဖူးသည်။
နည်းနည်း အတွေ့အကြုံကလေး ရလာတော့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူရသော စားပွဲဝိုင်းတွင် မွတ်ဆလင် စားပွဲ ညှပ်ထည့်ပေးခြင်း၊ သက်သတ်လွတ် စားသူပါသော စားပွဲဖြင့် ညှပ်ထည့်ပေးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာသည်။ မွတ်ဆလင် စားပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူရသော ဝိုင်းများတွင် တစ်ဝိုင်းသတ်သတ် ပါလာပါက သိပ်ပြသနာ မရှိသော်လည်း မွတ်ဆလင် အစားအစာ စားသူ သို့မဟုတ် သက်သတ်လွတ် စားသူမှာ တစ်ဦး နှစ်ဦး စသည်ဖြင့် စားပွဲတွင်း ကြားညပ် ပါလာပါက ပို၍ အလုပ်ရှုပ်သည်။ သူတို့ အတွက် ဟင်းကို တစ်ခေါက်သတ်သတ် သွား၍ ယူပေးရ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ် အများစုတွင် တည်ခင်းသော မွတ်ဆလင် အစားအစာမှာ ဟာလာ မဟုတ်ပဲ "No Pork No Lard" သာ ဖြစ်သည်။ ဟာလာ အစားအသောက်မှာ ဟာလာ မဟုတ်သော အစားအသောက် နှင့် မထိတွေ့ရခြင်း အတူတကွ မထားရခြင်း စသည့် ပိုမို တင်းကျပ်သည့် စည်းကမ်း များကို လိုက်နာရသည်။ "No Pork No Lard" ကတော့ ဝက်သား သို့မဟုတ် ဝက်ဆီ မပါကြောင်း အာမခံသော အစားအစာ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤနိုင်ငံတွင် သက်သက်လွတ်စားသူကို Vegetarian နှင့် Strict-Vegetarian ဟု နှစ်မျိုး ထပ်၍ ခွဲခြား ထားသေးသည်။ သာမန် Vegetarian မှာ ကြက်ဥ နှင့် နွားနို့စသည်တို့ကို မရှောင်ဘဲ စားသုံးလေ့ ရှိသည်။ Strict-Vegetarian အမျိုးအစားကတော့ အသွေးအသားကို လုံးဝ မစားရုံမျှ မက ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်း မစားပါ။ အရင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက Strict-Vegetarian တွေ ဘာလို့ ကြက်သွန်ဖြူမစားတာလဲ မေးတော့ “ကြက်” ပါလို့ မစားတာဟု နောက်၍ ဖြေခဲ့ဖူးသည်။ အစကတော့ ဘာလို့မှန်း ကျွန်တော်လည်း မသိပါ။ နောင်တွင် သက်သတ်လွတ် စားသူတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်သောအခါ တွင်မှ အသွေးအသား လုံးဝမစားသူ၏ အစာအိမ်သည် ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ကြက်သွန်ဖြူတွင် ပါဝင်သည့် ဓာတ်ကို မခံနိုင်သောကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ZT at 2:06 PM
Labels: စင်ကာပူ, ဘဝ
အားပေးနေပါတယ်။ ကျန်သေးရင် ဆက်ရေးပြပါဦး။
It's really intersting to read your experiences. Looking forward to reading your post.
ကိုပေါ နဲ့ SS
အားပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်း ဆက်ရေးပါဦးမယ်။
ကြုံမှကြုံတတ်တယ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဝယ်
ဒီကျွန်း ဒီတောင် ဒီအကောင်တွေ
သူတို့တွေ နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကား
အုတ်စ်ဟောက်ကျေးရွာ (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၆)
ပုံစံဖြည့် မှားတဲ့ အကြောင်းများ
ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ပေါ်မှာ (၃)
ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ပေါ်မှာ (၁)
ပထမကမ္ဘာ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ထူးဆန်းသော အယူအဆများ